Jabuuti: 141 qof oo maanta laga helay COVID-19 iyo hal sabab oo kordhisay kiisaska | Xaysimo
Home War Jabuuti: 141 qof oo maanta laga helay COVID-19 iyo hal sabab oo...
Jabuuti: 141 qof oo maanta laga helay COVID-19 iyo hal sabab oo kordhisay kiisaska
Tirada dadka uu ku dhacayo cudurka Coronavirus ee dalka Jabuuti ayaa sare usii kacday, ayada dowladda ay maanta shaacisay in xanuunkan laga helay 141 qof oo kale, 24-kii saac ee lasoo dhaafay.
141-ka qof ee cudurka laga helay ayaa ka mid ahaa 1,560 qof oo cudurka laga baaray 24-kii saac ee lasoo dhaafay.
Waa tiradii labaad ee ugu badneyd ee maalin qura laga helo cudurka COVID-19 ee dalka Jabuuti. Tiradii ugu badneyd maalin qura ayaa la diiwaan geliyey shalay, taasi oo ahayd 156 qof.
Wasaaradda caafimaadka Jabuuti ayaa sidoo kale shaacisay in tirada guud ee dadka cudurka laga helay ay iminka gaareyso 732 qof, ayada oo cudurka laga baaray 6,550 oo qof. Dadka u dhintay cudurka ayaa weli ah laba qof kaliya
Dadka laga helayo cudurka ee dalka Jabuuti, ayaa si xowli ah sare ugu sii kacaya, waxaana sababta ugu weyn ay dowladda ku sheegtay dadka oo aan qaadaneyn talooyinka la siiyey ee ah inay guryahooda ku nagaadaan kalana fogaadaan.
Inkasta oo bandow dala saaran yahay, haddana waxaa la araa dad xaafadaha isugu tegaya, kuwa cayaaraya kubbad, qaar dheelaya laadhuu, turub iyo waxyaabo kale, taasi oo sahashay in cudurka xowli u faafo.